टीका खरेल सुवेदी – मझेरी डट कम
कसैलाई सास्ती कसैलाई मस्ती
यही कोरोनाले कतिलाई नोटै नोट झारेको छ
यही कोरोनाले कतिलाई अकालमै मारेको छ
जसले मेहनत गर्छ, उसैलाई गाल्नुसम्म गालेपछि !
अरूको आँशु खाने वर्गलाई सजिलो पारेको छ
भदौको महिना बादल फाटेर सूर्य कहिल्यै ङिच्च दाँत देखाउँदैथ्यो भने कहिले ओठ लेब्राउँदै बादलुको घुम्टो भित्र लुक्न जान्थ्यो । मृगको बच्चो झैं चञ्चल बनेको सूर्य देखेर म त्यसै-त्यसै मुग्ध बनेकी थिएँ । त्यसै-त्यसै फुरुङ्ग भएर चङ्गा झैं उडिरहेको मेरो मन चमेलीको निन्याउरो अनुहार देखेर लट्टाइमा बेरिएको धागो अड्के झैं मेरो आँखा अनायासै उसको अनुहारमा गएर टक्क अड्यो । म उसलाई राम्रोसँग केलाइरहेकी थिएँ । ऊ भने आफ्नो कपालको चुल्ठो सुम्सुम्याउँदै तल गल्लीमा हिँडिरहेका दोहोरी लत्ता महिलाहरूको हुलमा हराइरहेकी थिई ।
मलाई उनका हरेक रचनाहरू असाध्यै मनपर्थ्यो । उनका हरेक रचनाहरू साहसीक कदमको लागि सराहनीयनै थिए । मैले उनका रचना मार्फतनै जीवनलाई वास्तवीक अर्थमा चित्रे मौका पाएको थिएँ । उनका रचनाहरू म दोहोर्याइ तेहर्याइ पढ्ने गर्थें ।
डिलकुमारीको पढाइप्रतिको राम्रो प्रगति देखेर उसका आमबुबाले आर्थिक अवस्था कमजोरनै भए पनि नीजि विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए । हैसियतभन्दा माथिको कार्य नै भएपनि ऋण लिदै आफ्ना तीन सन्तानलाई राम्रै विद्यालय पढाएका डिलकुमारीका आमाबुबा दिनदिनै ऋणमा भासिँदै गएका थिए । डिलकुमारीका दाजुहरू भने पढाइमा पटक्कै मन नलगाउने बरालिँदै विद्यालय छोडेर खोपी र क्यारिमबोर्ड खेलेर बेलुकी घर फर्कन्थे तर डिलकुमारी भने पढाइमा सधैं राम्रो अङ्क ल्याएर प्रथम हुने गर्थी ।
भीडभित्रको एक्लो मान्छे
ठण्डीको मौसम । जहाँ गएपनि जसको मुखबाट पनि चिसो मौसमकै बारेमा चर्चा–परिचर्चा सुनिन्छ । कोहीसँग भेटघाट भयो कि कुराकानीको सुरुवातनै ओहो ! सारो जाडो भत्रे वाक्यबाट हुन्छ ।
जाडोको बिदा मनाउने क्रममा हामी रमाइलो गर्न भनी घरबाट बाहिर निस्कियौं । धेरै दिनको अन्तरालमा बल्ल आज धमिलो हुस्सुलाई लोप्पा खुवाउँदै घाम पनि आफ्नो सुनौलो पहेँलो रुपमा प्रकट भएको छ । घामको न्यानोपनले मन फुरुङ्ग थियो । हाम्रा पाइलाहरु बस स्टेशनतिर मोडियो ।
नीलमणी झैं नीलो आकाश चँदुवाझैं टाँगिएको चारोको जोहोमा निस्किएका चराचुरुङ्गीहरु झूण्ड–झूण्ड भै रमाउँदै मीठो कलरवका साथ चिरबिराइरहेका थिए । सुनसान जमीन उदास अनुहार लगाएर बोझिलो निष्तब्धतामा बाँझै पल्टिएका थिए ।
निर्दोषी ती नयन उघारेर शरदले भर्खरै मात्र आफ्नो घुम्टो भित्रैबाट अलिअलि र्समाएझैं गरी पुलुक्क चिहाएर हेर्न लागिरहेकी मात्र छे । ऊ पनि आफ्नी दिदी वसन्तभन्दा कहाँ कम छे र ? सोह्र श्रृङ्गारले झकिझकाउँछे । अनेक वास्नादार अत्तरहरू छर्किएर बिरालोको चालमा हिँड्ने षोडषी युवतीझैं मसक्क मस्किँदै वर्षारानीले धोइपोती गरेको सुन्दर यस धर्तिमा मालिकनिझैं ढलीमली गर्दै देखापरेकी छे । मगमगाउँदी सुकसुकाउँदी मोहनीरुपधारी शरद आफ्नो माधुर्य वर्षाएर जगतका प्राणीहरूलाई कृष्ण भगवानले आफ्नो बाँसुरीको धुनले सारा प्राणीलाई लठ्ठ पारेझैं लठ्याउन आतूर छे । मानौं यो शरदको रुपरङ्ग देखेर सारा जगत मन्त्रमुग्ध बनोस् । मेघराजा पनि आफ्नी रानी वर्षालाई लिएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा आनन्दमा डुबिरहेका होलान् ।
भदौको उखरमाउलो गर्मी त्यसमा पनि टण्टलापुर घाम । हरियाली हेर्न त सातजन्म तपस्या गर्दा पनि कहाँ पाउनु र यो शहरमा अब । त्यसैत्यसै अत्यास लागेर आउँछ । घाम आफ्नो निरङ्कुश शक्तिको प्रदर्शनीमा उत्रिएको भएपनि बादल आफ्नो भएभरको बल निकालेर घामसँग पौंठेजोरी खेल्न आकाशमा मडारिरहेको छ ।
देश हाम्रो नेपाल हो,
नेपाली हो जात ।
द्वेश र भेदभाव ।
जातीयताको सिँढी चढी
नगरौं पक्षपात ।
कोही छैनौ उँचो-नीचो
बढौं एकै साथ ।
आज दिन घमाइलो छ । रातभर पानीरुपी वेदनाका आँसु बर्साएर आकाश पनि थाकेको जस्तो छ । मौन भएर मेरै शिरमाथि टाङ्गिएको छ । ठाउँठाउँमा कपासझैं सेता वादलका थुम्काथुम्की विभिन्न आकृति बनाएर एक आपसमा खेलिरहेका छन् । कपासका डल्लाझैं सेता यी बादलहरू आफ्नी आमाको सारीको सप्को भित्र कु कु गर्दै बेलाबेला चियाएर हेर्छन् । यी बादलहरू कोही बेला घामसँग जिस्किँदै घामलाईनै पनि ढाकेर छायाँ बनाइदिन्छन् । ओहो कत्ति चुलबुले, चकचके छन् यिनीहरू ।
कौसीमा गएर यस्तो मनोरम दृश्यमा हराउँदा हराउँदै पनि मेरो आँखा त्यो परको सुनसान झुपडीमा गएर ठोक्किन्छ । गगनचुम्बी महलहरूले भरिएको कङ्क्रिटको यो शहरभित्र पनि हरियो रुख विरुवाले ढाक्न भ्याएको छ त्यो घरलाई । चारैतिर लहराले बेरिएको छ मानौं वर्षौंदेखि त्यो घरले एक्लै बाँच्नुपरेको छ । उसको शरीरमा उम्रिएका झयाउ लेउलाई उखेल पाखल गरी सिङ्गारपटार गरी नवयौवना नारीझैं बनाउने कोही आएन जस्तो छ । कुपोषणले सताएको वालकझैं त्यो घर वर्षौंदेखि एकै पोको परेर बसेको होला । यो घर कति अभागी रहेछ ।
पैसाको बुइ चढेर
डुक्रिन्छ साँढे गोरु झैं ।
पैसाको धाक र रवाफमा
मातेको छ गरीबको
रगत र पसिना पिएर ।
मेघको यो गडगडाहटले केही बेर तानेपनि उसको निस्तेज अनुहारमा शुन्यताको कालो धब्बाको कुहिरोले फेरि छोप्दछ जब उसकी सौतेनी आमाको कठोर बचनवाणको वर्षा हुन थाल्दछ । उसको नामनै बिगारेर उसकी सौतेनी आमाले उसलाई सम्बोधन गरी बोलाउँदै काम अह्राउँछे । हुनत उसको नाम सरिता हो । उसकी आमाले माया गरेर सरु भनी बोलाउँथी तर उसकी आमाको माया सरुले ६ वर्षको उमेरसम्म मात्र पाउन सकी । ऊ र उसको दाइ सरोजलाई आफ्नी आमाले रातभर सुम्सुम्याउँदै सुँक्क-सुँक्क गरी रोएको सम्झनाले उसको आँखा अनायासै रसाएर आउँछ ।